Maneho hevitra momba ny fiovan'ny tontolon'ny Media | Martech Zone
Maneho hevitra momba ny fiovan'ny tontolon'ny Media
Alatsinainy, Aogositra 28, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ruth Holladay's bilaogy anio dia manondro an lahatsoratra tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Al Gore ary nanontany ny heviny tamin'ny media. Manokana, ny mpanadihady dia manontany an'i Gore momba ny fampifangaroana ny haino aman-jery, na amin'ny alàlan'ny orinasa na avy amin'ny governemanta (iraisam-pirenena). Hoy i Gore:
Resadresaka ny demokrasia, ary ny andraikitra lehibe indrindra amin'ny fampitam-baovao dia ny fanamorana ny resaka demokrasia. Izao dia voafehy kokoa ny resaka, afovoany kokoa. - Al Gore
Wow. Tsy mpankafy an'i Gore, tena gaga aho ary faly tokoa tamin'ny hafany teto. Izaho dia iray amin'ireo lehilahy tena mino fa ny media no andramo ny fitaomana ny tontolo politika eto amintsika.
Aza diso hevitra aho… Tsy mino aho fa ny haino aman-jery dia andiana voanjo havia amin'ny antso an-tariby miafina manandrana manilika Repoblikana, mieritreritra fotsiny aho fa maro ny olona ao amin'ny haino aman-jery sy ny tontolon'ny fialamboly no manana fiainana hafa tanteraka. noho isika sisa. Vokatr'izany dia mazàna tsy mitovy ny fahitan'izy ireo an'izao tontolo izao. Ankoatr'izay, ny hoe nahita fianarana tsara izy ireo ary amin'ny toeran'ny manam-pahefana miteny, dia manana polipitra mpampijaly izy hanodikodina ny sain'ny olona.
Manova an'io tontolo io ny fanaovana bilaogy sy ny Internet. Rehefa avy nisoratra anarana tamin'ny gazety 2 nandritra ny folo taona mahery, dia tsy noraisiko tamim-pahatsorana izany. Namaky ny vaovaoko rehetra an-tserasera aho, ary namaky ny valin'ny tontolon'ny bilaogy tamin'ilay vaovao. Matetika aho no manomboka mahita vaovao marobe alain'ireo bilaogera noho ireo gazety. Heveriko fa ny iray amin'ireo antony dia ny fanorahana bilaogy manala ny 'sivana' amin'ny hafatra.
Rota bilaogy dia ohatra mahafinaritra amin'izany. Navoaka tamin'ny fatoran'ny tonian-dahatsoratra i Ruth ary ny bilaoginy dia manitsaka ny lohalaharana amin'ny sehatry ny fanaovana bilaogy Indiana. Tiako izy izany. Rehefa avy namaky ny lahatsoratr'i Ruth nandritra ny taona maro aho dia tsy nahita ny fientanam-po sy ny lelafo tao amin'ny hafany raha tsy efa nisotro ronono izy ary nanomboka nibilaogy. I Rota dia toy ny omby nandositra ny fivarotana sinoa! Mety tsy hanaiky ny hafany aho indraindray, saingy tsy andriko ny hamaky ny lahatsoratra manaraka.
Ny antenaiko dia ny hitohizan'ny Internet ho làlana vaovao “hanamorana ny resaka demokrasia”. Manantena aho fa manome megaphone ho an'ireo tsy misy feo eto amin'ny tontolontsika sy eto amin'ny fiarahamonintsika manokana. Mahery tokoa ny teny amin'ny pejy… indrindra rehefa tsy voafehy izy ireo.
Ho ela velona ny fahalalahana miteny!
Poll-n'ny Online Week Week: Inona no bilaogy tianao indrindra?
Fahazoana B2B: Makà lisitra bebe kokoa amin'ny volanao